Ezra 10 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
10 Ke kaloku kamsinya nje akuba uEzra ethandazile+ enze novumo+ ngoxa wayelila eziwise phantsi+ phambi kwendlu+ yoTHIXO oyinyaniso, abo bakwaSirayeli baqokelelana ndawonye beza kuye, ibandla elikhulu kakhulu, amadoda nabafazi nabantwana, kuba abantu balila kakhulu. 2 Wandula uShekaniya unyana kaYehiyele+ wakoonyana bakaElam+ waphendula waza wathi kuEzra: “Thina—senze ngokungathembeki nxamnye noThixo wethu, kangangokuba abafazi basemzini abavela kwizizwana zeli lizwe sibanike indawo yokuhlala.+ Ke kaloku kukho ithemba+ ngoSirayeli ngokuphathelele oku. 3 Ke kaloku masenze umnqophiso+ noThixo wethu wokulahla+ bonke abafazi nabo bazelwe ngabo ngokwecebo likaYehova nelabo bangcangcazelayo+ ngumyalelo+ woThixo wethu, ukuze kwenziwe ngokomthetho.+ 4 Sukuma, kuba lo mbandela uphezu kwakho, yaye sikunye nawe. Yomelela uthabathe inyathelo.” 5 UEzra waphakama waza wafungisa+ iintloko zababingeleli, abaLevi naye wonke uSirayeli, ukuba benze ngokweli lizwi. Ngako oko bafunga. 6 Ke kaloku uEzra waphakama phambi kwendlu yoTHIXO oyinyaniso waza waya kwiholo yokudlela+ kaYehohanan unyana kaEliyashibhi. Nangona waya apho, akazange adle sonka+ engazange asele manzi, kuba wayezilile+ ngenxa yokungathembeki kwabantu abathinjiweyo. 7 Bandula ke badlulisa isibhengezo kulo lonke elakwaYuda nelaseYerusalem ngenxa yabo bonke ababethinjiwe ngaphambili+ ukuba baqokelelane ndawonye eYerusalem; 8 yaye nabani na owayengazange afike+ kwisithuba seentsuku ezintathu ngokwesigqibo seenkosana+ namadoda amakhulu—iimpahla zakhe zonke zaziya kwahlulelwa intshabalalo+ aze yena ahlulwe+ kulo ibandla labantu abathinjiweyo. 9 Ngoko onke amadoda akwaYuda nakwaBhenjamin aqokelelana ndawonye eYerusalem kwisithuba seentsuku ezintathu, oko kukuthi, ngenyanga yesithoba+ ngomhla wamashumi amabini wenyanga leyo, yaye bonke abantu baqhubeka behleli kwindawo evulekileyo yendlu yoTHIXO oyinyaniso, bengcangcazela ngenxa yombandela lowo nangenxa yesiphango semvula.+ 10 Ekuhambeni kwethuba uEzra umbingeleli waphakama waza wathi kuwo: “Nina nenze ngokungathembeki ngokuthi ninike abafazi basemzini+ indawo yokuhlala ukuze nongeze kwityala likaSirayeli.+ 11 Ke kaloku yenzani uvumo+ kuYehova uTHIXO wookhokho benu nenze oko akholiswa kuko+ nizahlule kwizizwana zeli lizwe nakubafazi basemzini.”+ 12 Laza lonke ibandla laphendula ngelizwi elikhulu lathi: “Kuphezu kwethu ukwenza kanye ngokwelizwi lakho.+ 13 Noko ke, abantu baninzi, yaye lixesha lesiphango semvula, akunakumiwa phandle; yaye umsebenzi awunakuba ngowosuku olunye okanye ezimbini, kuba siye savukela kakhulu kulo mbandela. 14 Ngoko, iinkosana zethu+ mazincede zibe ngabameli bebandla lonke; yaye, bonke abo bakwizixeko zethu abaye banika abafazi basemzini indawo yokuhlala, mabeze kunye namadoda amakhulu esixeko ngasinye nabagwebi baso ngamaxesha amiselweyo, de sikuthothise ukuvutha komsindo kaThixo wethu kuthi, ngalo mbandela.” 15 (Noko ke, uYonatan unyana ka-Asaheli noYazeya unyana kaTikiva bema nxamnye+ noku, yaye bancedwa nguMeshulam noShabhetayi+ nabaLevi.) 16 Abo babethinjiwe+ benza ngaloo ndlela; yaye uEzra umbingeleli namadoda awayeziintloko zoobawo bezindlu zooyise,+ kwanabo bonke ngokwamagama abo, bazahlula baza baqalisa ukuhlala ngosuku lokuqala lwenyanga yeshumi+ ukuze babuze ngalo mbandela;+ 17 bagqiba ngawo onke amadoda awayenike abafazi basemzini+ indawo yokuhlala ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala. 18 Abanye boonyana bababingeleli+ kwafunyaniswa ukuba babenike abafazi basemzini indawo yokuhlala; koonyana bakaYeshuwa+ unyana kaYehotsadaki+ nabazalwana bakhe, uMahaseya noEliyezere noYaribhi noGedaliya. 19 Kodwa bathembisa ngokuxhawula ngezandla ukuba baza kubalahla abafazi babo, nokuthi, njengoko babenetyala,+ kwakufanele kubekho inkunzi yegusha+ yomhlambi ngenxa yetyala labo. 20 Koonyana bakaImere+ yayinguHanani noZebhadiya; 21 koonyana bakaHarim,+ nguMahaseya noEliya noShemaya noYehiyele noUziya; 22 koonyana bakaPashure,+ nguEliyohenayi, uMahaseya, uIshmayeli, uNetaneli, uYozabhadi noEleyasa. 23 KubaLevi, nguYozabhadi noShimeyi noKelaya (oko kukuthi, uKelita), uPetahiya, uYuda noEliyezere; 24 kwiimvumi, nguEliyashibhi; kubagcini-sango, nguShalum noTelem noUri. 25 KwaSirayeli, koonyana bakaParoshe+ yayinguRamiya noIziya noMalekiya noMiyamin noEleyazare noMalekiya noBhenaya; 26 koonyana bakaElam,+ uMataniya, uZekariya noYehiyele+ noAbhedi noYeremoti noEliya; 27 koonyana bakaZatu,+ nguEliyohenayi, uEliyashibhi, uMataniya noYeremoti noZabhadi noAziza; 28 koonyana bakaBhebhayi,+ nguYehohanan, uHananiya, uZabhayi, uAtelayi; 29 koonyana bakaBhani, nguMeshulam, uMaluke noAdaya, uYashubhi noShehali noYeremoti; 30 koonyana bakaPahati-mowabhi,+ nguAdena noKelali, uBhenaya, uMahaseya, uMataniya, uBhetsaleli noBhinuwi noManase; 31 koonyana bakaHarim,+ nguEliyezere, uYishiya, uMalekiya,+ uShemaya, uShimeyon, 32 uBhenjamin, uMaluke noShemariya; 33 koonyana bakaHashum,+ uMatenayi, uMatata, uZabhadi, uElifelete, uYeremayi, uManase noShimeyi; 34 koonyana bakaBhani, nguMahadayi, uAmram noUweli, 35 uBhenaya, uBhedeya, uKeluhi, 36 uVaniya, uMeremoti, uEliyashibhi, 37 uMataniya, uMatenayi noYahasu; 38 koonyana bakaBhinuwi, nguShimeyi 39 noShelemiya noNatan noAdaya, 40 uMakenadebhayi, uShashayi, uSharayi, 41 uAzareli noShelemiya, uShemariya, 42 uShalum, uAmariya, uYosefu; 43 koonyana bakaNebho, nguYeyeli, uMatitiya, uZabhadi, uZebhina, uYadayi noYoweli noBhenaya. 44 Bonke aba bamkela abafazi basemzini,+ baza babandulula abafazi kunye noonyana babo.